Iindaba - Jiangyin Puyang Heavy Industry CO., LTD
Xa ukufumanisa okungahambi kakuhle, i-detector flaw, i-frequency, probe njalo njalo zilungisiwe, kwiimeko ezininzi zisebenzisa ngokuthe ngqo umgangatho ohambelanayo, cacisa le miqathango, kwaye uzame ukudibanisa nemimiselo yomsebenzisi.
Ukufunyanwa kwe-Ultrasonic kwe-shaft shaging enkulu, i-2 ~ 3 iziphene ezilinganayo ezincinci, ukongeza kwinxalenye yindawo emhlophe, okuninzi kukuqhekeka okuncinci, indawo encinci evulekileyo, imingxunya, iipinoli kunye nezinye iziphene.
Uninzi lweziphene luchaphazela amaza asezantsi, kwaye ubungakanani bempembelelo buyahluka ngohlobo, ubungakanani, isikhundla kunye nolwalathiso lweziphene. Ukuhanjiswa okuxineneyo kwamanqaku amhlophe kunye nokufakwa konke kunefuthe kumaza asezantsi, kodwa kumanqanaba ahlukeneyo. Ukubonakaliswa kwenqaku elimhlophe kuphezulu, kwaye ukuhanjiswa kokubandakanywa kuphezulu. Ke ngoko, ukucocwa kwenqaku elimhlophe kumaza asezantsi kukhulu kunoko kubandakanywa. Ngaphantsi kobuntununtunu obufanayo, amaza amaninzi asezantsi amanqaku amhlophe ancipha ngokukhawuleza kwaye abonisa amaxesha ambalwa. Amaza asezantsi okubandakanywa ancipha kancinci ngamaxesha amaninzi, kuba inqaku elimhlophe sisiphene sokuqhekeka, kuya kunciphisa ubuntununtunu bokubhaqwa. Isiphene samaza sihla kancinci ngelixa iliza elisezantsi lihla ngokukhawuleza.
Crack inclusions ngakumbi kubukho bomoya, umoya ngumyalelo wobungakanani be-impedance ye-acoustic emalunga ne-10 ophindwe kabini, kunye ne-acoustic impedance yezixhobo zetsimbi eziodolo zobukhulu malunga ne-10⁶, umahluko obonakalayo kwiimpawu ze-acoustic zomoya kunye nezinto zentsimbi . Umda phakathi kokuqhekeka kunye nezinto ezisisiseko ngumda othambileyo.
Ngokuhlalutya iimpawu zokusasaza zamaza e-ultrasonic kwindawo ephakathi kunye neempawu ze-acoustic zeziphene zangaphakathi zokulibala okukhulu, kunokubonwa ukuba iimpawu zomda weziphene ezahlukeneyo zinokuhlelwa ngokwamacandelo amabini.
(1) Ukusukela ukuba ii-inclusions (i-slag) kunye nezinye izinto ikakhulu zi-oxides ze-Si, Al, Fe, njl., Kunokuthiwa ukungafakwa kwesinyithi kuyindlela yegesi ekhoyo kwisinyithi. Olu hlobo lwezinto kwi-acoustic uphawu lwe-impedance lungaphantsi kwe-acoustic ye-impedance matrix, kwaye ke olu hlobo lwesiphene kunye nomda wezinto ze-substrate zinokuthathwa njengomda "othambileyo", oko kukuthi, ukuqhekeka, iflake, indawo yokuncipha, iqamza lomoya, ukubandakanywa igolide kwaye ugqibezele umda ungowomda "othambileyo", umntu othe nkqo otyhidiweyo wadutyulwa kolu hlobo lwenguqulelo yesigaba se-echo ngu-180 °.
(2) Umda wobumbano lwesinyithi esine-high-density ubandakanya umda "onzima", kwaye inqanaba lesibonakalisi esibonisiweyo xa isandi se-ultrasonic sime nkqo kwesi sixhobo sifana neso samaza ombane womntu. Ukufakwa kwesinyithi yi-tungsten, i-molybdenum, njalo njalo. , ke olu hlobo lwezixhobo zensimbi ezinoxinano oluphezulu lubaluleke kakhulu kunokubumba i-acoustic impedance yezixhobo ze-substrate, olu hlobo lwesiphene kunye nomda wezinto zangaphantsi zinokuthathwa njengemida "enzima". Ukuqhekeka, amabala amhlophe, imingxunya yokuncipha, amaqamza kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi, ukubonakaliswa kwazo kunye nokuhanjiswa kwazo konke kungabalwa ngaphandle kokuphambana kwe-acoustic, ebonisa inqanaba lokuncitshiswa kwe-amplitude yesandi se-ultrasonic echo. Umahluko we-acoustic impedance phakathi kwe-non-metallic inclusions kunye ne-matrix tissue yeyona incinci, kwaye ukuhambisa kuphezulu. Ke ngoko, ukucinywa kwe-echo ye-non-metallic inclusions inzima kakhulu, ebonisa ukuba ubungakanani bamaza asezantsi amancinci okanye akukho longezo liphantsi ngexesha lokufunyanwa. Indawo emhlophe ibonakalise umtshangatshangiso womelele kakhulu, kodwa ngenxa yokuba ibonakala ngokwamaqela, ifom ye-wave icacile kwaye idityanisiwe ekufumaneni. Amaza reflection of crack siphene yomelele kwaye eyodwa, icace gca. Ngenxa yenani elikhulu lokufakwa okungqonge isiphako somqala kunye noburhabaxa bomphezulu, iliza elibonakalisiweyo liya kuba nokuncipha okukhulu.